Izindaba - Izicelo Ngokubanzi ze-Cooling Tower
Imibhoshongo yokupholisa isetshenziselwa ukufudumeza, ukungena komoya, nomoya opholisayo (i-HVAC) nezinhloso zezimboni. Inikeza ukusebenza ngendlela engabizi futhi eyonga amandla izinhlelo ezidinga ukupholisa. Izikhungo zezimboni ezingaphezu kuka-1500 zisebenzisa amanzi amaningi ukupholisa izitshalo zazo. Izinhlelo ze-HVAC zisetshenziswa ngokujwayelekile ezakhiweni ezinkulu zamahhovisi, ezikoleni, nasezibhedlela. Imibhoshongo yokupholisa yezimboni inkulu kunezinhlelo ze-HVAC futhi isetshenziselwa ukususa ukushisa okumunceke kumasistimu amanzi apholisayo ajikelezayo asetshenziswa ezitshalweni zamandla, izindawo zokuhluza i-petroleum, izitshalo ze-petrochemical, izitshalo zokucubungula igesi yemvelo, izitshalo ezisebenza ngokudla nezinye izikhungo zezimboni.
Izinqubo nemishini yezimboni ikhiqiza ukushisa okukhulu kangangoba kudamba ukuchithwa okuqhubekayo ukuze kusebenze kahle. Ukushisa kufanele kube semvelweni. Lokhu kwenziwa ngenqubo yokushintshanisa ukushisa okuyisisekelo sobuchwepheshe bombhoshongo wokupholisa.
Kuyathakazelisa ukuthi yize imibhoshongo yokupholisa ingamadivayisi we-20th ikhulu leminyaka, ulwazi ngabo empeleni lilinganiselwe. Abanye abantu bakholelwa ukuthi imibhoshongo yokupholisa iyimithombo yokungcola, kepha ukuphela kwento abayikhiphela emoyeni wumhwamuko wamanzi.
Ngemuva kweminyaka eminingi yokuthuthukiswa kwalobu buchwepheshe, imibhoshongo yokupholisa iyatholakala ngezinhlobo nosayizi ohlukile. Ngakunye kwalokhu kusebenza ekucushweni okuthile komthwalo, isizathu sokuthi kubalulekile ukuthi uchaze izinketho ezitholakalayo. Qaphela ukuthi ngaphandle kwemiklamo ehlukile, umsebenzi oyisisekelo uhlala njengowokuqeda ukushisa kohlelo lokwakha noma inqubo eya emoyeni ngokuhwamuka. Nazi ezinye izigaba:
A.Imishini yokupholisa okusalungiswa kwemishini
B.Umbhoshongo wokupholisa umkhathi
C.Umbhoshongo wokupholisa okusalungiswa weHybrid
D.Ukugeleza komoya okuphawuleka ngokugeleza komoya
E.Ukwakhiwa kombhoshongo ophawuleka ngokwakhiwa
F.Umumo obonakala wokupholisa umbhoshongo
G.Ukupholisa umbhoshongo kususelwa endleleni yokudlulisa ukushisa
Ngayinye yalezi zingaphatha imibhoshongo eminingana yokupholisa. Isibonelo, ukuhlukanisa imibhoshongo yokupholisa ngokwendlela yokudlulisa ukushisa kunikeza izinketho ezintathu: Imibhoshongo yokupholisa eyomile, imibhoshongo yokupholisa yesifunda evulekile nemibhoshongo yokupholisa yesifunda evaliwe / imibhoshongo yokupholisa uketshezi.
Imibhoshongo yokupholisa mhlawumbe ibiza kakhulu ekupholiseni kwezimboni uma kuqhathaniswa nezinye izinketho, kepha inselelo yokusebenza kahle ingaba ukwehla. Ukuqapha isici sokusebenza kahle kubalulekile njengoba kuqinisekisa okulandelayo:
►Ukunciphisa ukusetshenziswa kwamanzi
►Impilo yesevisi yemishini enwetshiwe
►Izindleko zokusebenza ezincishisiwe
Ukugcina umbhoshongo wokupholisa usebenza kahle, izinto ezintathu zibalulekile: qonda uhlobo lombhoshongo wokupholisa owusebenzisayo, sebenzisa amakhemikhali kahle futhi ulandele ukulahleka kwamanzi kohlelo.
Uhlelo lombhoshongo wokupholisa luvamile ezimbonini eziningi, okuyinhloko phakathi kwazo ngamandla, ezentengiso, iHVAC nezimboni. Ekusetheni kwezimboni, uhlelo luyakwenqaba ukushisa okuvela emishinini, okushisa inqubo yenqubo phakathi kweminye imithombo. Ngokuqondile, imibhoshongo yokupholisa yezimboni ijwayelekile ezindaweni zokucubungula ukudla, izindawo zokuhluza i-petroleum, izitshalo zegesi yemvelo kanye nezitshalo ze-petrochemical.
Ezinye izinhlelo zokusebenza zezimboni:
►Ama-compressors omoya opholile ngamanzi
►Umjovo wePlastiki nomshini wokubumba wokushaya
►Die umshini ekubunjweni
►Isitshalo esiqandisini nesibanda
►Izinqubo ze-Anodizing plant
►Isitshalo sokuphehla ugesi
►Amasistimu wokupholisa umoya opholile nemishini ye-VAM
Ukukhetha isixazululo sokupholisa uhlobo lokucatshangelwa okuphelele kwezindleko, isikhala, umsindo, izikweletu zamandla nokutholakala kwamanzi. Uma ungaqiniseki ukuthi iyiphi imodeli oyidingayo, sicela uxhumane nathi ukuze uthole ukuholwa okwengeziwe ngokukhululekile.